Typesdị mmiri ara | Rayson
Site na ihe ohuru ohuru na teknụzụ na ụzụ na teknụzụ na-eme ka ọ pụta ìhè ma na-arapara na mmepe nke teknụzụ. Udiri mmiri matragedes anyị nwere ndị ọrụ ọkachamara nwere ọtụtụ ahụmịhe na ụlọ ọrụ. Ọ bụ ha na-enye ndị ahịa ọrụ dị elu karịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa mmiri ọhụrụ anyị ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Ndị ọkachamara anyị ga-ahụ n'anya inyere gị aka n'oge ọ bụla. Ọ ga-esiri ndị mmadụ ike ịchọta eri ọ bụla ma ọ bụ nke na-adịghị mma na-eme na ngwaahịa a.